Sat, May 30, 2020 at 4:27am
रसुवा : प्रदेशसभा ‘क’ मा काँग्रेस विजयी, प्रतिनिधिसभातर्फ पनि अग्रता
शुक्रबार, मंसिर २२, २०७४ साल
रसुवा, २२ मंसिर । जिल्लामा प्रदेशसभा ‘क’ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनतर्फबाट नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार प्रभात लामा विजयी भएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत पुनाराम खनालले दिएको जानकारी अनुसार लामा ६ हजार ९७६ मत ल्याई विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले)का करन्याल तामाङले पाँच हजार १५२ मत प्राप्त गरे । अहिलेसम्मको मतगणनामा प्रतिनिधिसभातर्फ काँग्रेसका मोहन आचार्यले सात हजार ६६९ मत प्राप्त गरेका छन्..
"मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजकन छैन" : राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौँ, २२ मंसिर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा संक्रमणकालको अन्त्य नहुँदा मानवअधिकारको अवस्था सुढृद्ध हुन नसकेको बताएकी छिन् । शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजना गरेको विशेष समारोहका मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (२०७३-७४) ग्रहण गर्दै उनले मुलुकमा संक्रमणकालीन अवस्थामा सोचेअनुरुप मानव अधिकारको अवस्था सुढृढ हुन नसकेको बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गरेर जानु जरुरी भएको उल्लेख गरिन् । आयोगले नेपालको संविधानअनुसार..
हुम्ला : प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र, प्रदेश ‘क’ मा एमाले विजयी
हुम्ला, २२ मंसिर । जिल्लामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्कबहादुर लामा विजयी भएका छन् । लामाले ८ हजार ४९१ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका मंगलबहादुर शाहीले ८ हजार ४४४ मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, प्रदेश ‘क’ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका दलबहादुर रावल विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका थानबहादुर रोकायाले चार हजार..
निर्वाचन अपडेट : काठमाडौँ २ र ४ मा एमाले, १ मा कांग्रेसको अग्रता
काठमाडौँ, २२ मंसिर । काठमाडौँ क्षेत्र नं २ र ४ को प्रारम्भिक मतपरिणामअनुसार वाम गठबन्धनले अग्रता लिएको छ । बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ मा नेपाली काँग्रेसले अग्रता लिएको छ । काठमाडौँ १ मा खसेको कुल मत २०४५ मध्ये नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले ९४० मत प्राप्त गर्नुभएको काठमाडौँ क्षेत्र नं १ का सहायक निर्वाचन अधिकृत कृष्ण..
बाजुराको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ मा वाम गठबन्धन विजयी
बाजुरा, २२ मंसिर । बाजुरा प्रदेश ‘क’ मा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । बाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार ब्वनेका नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी सचिव बलदेव रेग्मीले नौ हजार ८४० मत प्राप्त गरी विजयी भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत पुष्पराज थपलियाले जानकारी दिए । वाम गठबन्धनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका जनकराज गिरीले आठ हजार ३११ मत ल्याएका थिए । बलदेव रेग्मीले एक हजार ५२९ मतले..
पछिल्लो मतपरिणाम : अहिलेसम्म कसले–कति स्थानमा जित हासिल गरे ?
काठमाडौं, मंसिर २२ । गत मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो चरणको निर्वाचन भएका हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाको मतपरिणाम सार्वजनिक हुन थालेको छ । अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा एमालेका तीनजना विजयी भएका छन् । त्यसैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना विजयी भएका छन् भने एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वा्चित भएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यमा भने नेकपा एमालेका ५, माओवादी केन्द्रका २, नेपाली..
सप्तरीमा मतगणना शुरु उपेन्द्र यादव, उमेश यादव र जयप्रकाश ठाकुरबीच प्रतिस्पर्धा
सप्तरी, २२ मंसिर । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत सप्तरीमा मतगणना कार्य आज दिउँसो १ बजेबाट शुरु भएको छ । जिल्ला मुख्य निर्वाचनको कार्यालयका प्रमुख हरिश्चन्द्र ढुंगाना र सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागिरथ पाण्डेय र निर्वाचनमा भाग लिएका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिबीचको छलफलपछि दिउँसो १ बजेदेखि मतगणना कार्य शुरु भएको प्रजिअ पाण्डेले बताए । मतगणना गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको छ । साथै,..
म्याग्दीको प्रदेशसभा (क) मा माओवादी र (ख) मा एमाले विजयी
बाबियाचौर, २२ मंसिर । म्याग्दीको प्रदेशसभा सदस्यमा क्षेत्र (क)बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का विनोद केसी निर्वाचित भएका छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका केसीले काँग्रेस राप्रपा गठबन्धनका भीमप्रसाद गौचनलाई दुई हजार ५२६ मत अन्तरले पराजित गरेका छन् । केसीले १४ हजार ७०४ र उनका प्रतिस्पर्धी राप्रपाका गौचनले १२ हजार १७५ मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ..
काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ मा पोखरेल अगाडि, प्रकाशशरण महत पछ्याउंदै
काठमाडौँ, २२ मंसिर । काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं ५ को प्रारम्भिक मतगणनामा वाम गठबन्धनका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार ईश्वर पोखरेलले अग्रता लिएका छन् । प्रारम्भिक नतिजाअनुसार पोखरेलको १४०० र नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार डा प्रकाशशरण महतको ६१३ मत रहेको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं ५ र ७ को सहकारी विकास विभागको तालीम केन्द्र बानेश्वरमा मतगणनाका जारी छ । त्यसैबीच काठमाडाँै क्षेत्र नं ९ र १० को..
भक्तपुर, २२ मंसिर । भक्तपुर क्षेत्र नं २ मा विवादका कारण मतगणना कहीले शुरु गर्ने भन्ने अनिश्चित बनेको छ । बिहान १० बजे सर्वदलीय बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि मतगणना अनिश्चित बनेको हो । डेढ घण्टा लामो सर्वदलीय बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधि निशान ढुंगेलले बालकोट घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, घाइतेको उपचार हुनुपर्ने र घरमा भएका क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेको बताए । उनले भने–“बालकोट..
बागलुङमा मतान्तर बढाउँदै वाम गठबन्धन, कांग्रेस निकै पछाडी
बागलुङ, २२ मंसिर । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ जिल्लाका छवटै निर्वाचन क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारको अग्रता कायमै छ । पछिल्लो मत परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ मा नेकपा (एमाले)का सूर्यप्रसाद पाठकले नेपाली काँग्रेसका चम्पादेवी खड्कालाई फराकिलो मतान्तरले पछि पार्दै अग्रता लिइरहेका छन् । पाठकले १४ हजार ९१२ मत प्राप्त गरेका छन् भने खड्काले ९ हजार ८७० मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, प्रतिनिधिसभा..
निर्वाचन अपडेट : मोरङमा मतगणना शुरु
विराटनगर, २२ मंसिर । मोरङमा मतगणना आज बिहान १०ः३० बजेदेखि शुरु भएको छ । छवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस जिल्लाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना शुरु भइसकेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको हो । विराटनगरस्थित आदर्श उच्च माविमा मतगणना कार्य भइरहेको छ । यसअघि बसेको सर्वदलीय बैठकले छिटोछरितो मतगणना गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको तीन ठाउँमा मतगणना सहमति जनाएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । -रासस ..
गोरखा, २२ मंसिर । गोरखा १ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा वाम गठबन्धन र २ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार मत परिणाम अगाडि देखिएका छन् । बिहीबारबाट मतगणना गरिएको गोरखामा अहिले बिहानसम्मको मतगणनामा गोरखा १ प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका नेता हरिराज अधिकारी ४,९३४ मतका साथ अघि र काँग्रेसका उम्मेदवार चीनकाजी श्रेष्ठ ४,४७२ मतका साथ पछ्याइरहेका छन् । अहिलेसम्म १० हजार ८७४ मत गणना भएको..
मतगणना तथा मतपेटिका संकलनको विवरण आउने क्रम जारी
काठमाडौँं, २२ मंसिर । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना तथा मतपेटिका संकलनको विवरण आउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार, मंसिर १० मा निर्वाचन सम्पन्न भएका ३२ जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ ३७ र प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ७४ निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना शुरु भई कतिपय निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम परिणाम आउने क्रम शुरु भइसकेको छ..
नवौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला शनिबारदेखि काठमाडौँमा हुने
काठमाडौँ, २२ मंसिर । नवौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला शनिबारदेखि काठमाडौँमा शुरु हुने भएको छ । यही मंसिर २५ गतेसम्म डिल्लीबजारको नेपाल सांस्कृतिक संघमा हुने उक्त महाभेलाको उदघाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने कार्यक्रम छ । आगामी सोमबार सम्पन्न हुने सो भेलामा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको पनि सहभागिता रहनेछ । उक्त कार्यक्रमको ‘विकास र समृद्धिको आधार : महिला र युवाको समान अवसर’ भन्ने नारा तय..
कंकालिनी नगरपालिकाको गोबरगाढाबाट हेलिकप्टरमा मतपेटिका ल्याइयो
राजविराज, २२ मंसिर । सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–१३ स्थित गोबरगाढामा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतपेटिका नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट ल्याइएको छ । सुरक्षाको दृष्टिले समेत अति संवेदनशील रहेको उक्त मतदान केन्द्रबाट राजविराजस्थित भीमदल गणको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले सुरक्षित साथ मतपेटिका ल्याएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । कोशी टप्पुमा अवस्थित रहेको, वरीपरी नदीले घेरिएको र भौगोलिक विकटताका कारण त्यहाँबाट मतपेटिका ल्याउन समस्या भइरहेका कारण नेपाली सेनाको..
रुकुम, २२ मंसिर । रुकुम पूर्वका दुवै प्रदेशसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रदेशसभा क्षेत्र नं (क) मा आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेकाका दूतकुमार पुनलाई तीन हजार २८३ मतले पछि पार्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तेजबहादुर ओली विजयी भएका हुन् । विजयी ओलीले पाँच हजार ४२७ मत प्राप्त गर्दा पुनले दुई हजार १४४ मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन..
मुस्ताङमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा (एमाले) विजयी
पोखरा, २२ मंसिर । पहिलो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत गत मंसिर १० गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मुस्ताङ जिल्लामा नेकपा (एमाले) विजयी भएको छ । मुस्ताङको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एमालेका प्रेमप्रसाद तुलाचन तीन हजार ५४४ मत ल्याई विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका रोमी गौचन थकालीले तीन हजार २८१ मत ल्याएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख सीताराम शर्मा लामिछानेले जानकारी..
रुकुम पूर्वमा वाम गठबन्धनकी कमला रोका विजयी
रुकुम, २२ मंसिर । रुकुम पूर्वमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)की प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार कमला रोका विजयी भएकी छिन् । रोकाले आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेपाली काँग्रेसका हरिशंकर घर्तीलाई ६ हजार २८ मतअन्तरले पछि पार्दै विजयी भएकी हुन् । जम्मा खसेको मत १८ हजार ३१ मध्ये बिजयी भएकी रोकाले १० हजार ४३४ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी घर्तीले चार हजार ४०६ मत ल्याएको मुख्य..
रसुवामा लोकतान्त्रिक गठबन्धन अगाडि, वाम गठबन्धन पछ्याउँदै
रसुवा, २२ मंसिर । प्रतिनिधिसभाको एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको रसुवा जिल्लामा मतगणना जारी रहेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्मको मतगणना परिणाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नेका उम्मेदवार मोहन आचार्यले ४ हजार ७७२ र वाम गठबन्धनका नेकपा एमाले उम्मेदवार जनार्दन ढकालले ३ हजार ३३२ मत प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी, प्रदेश (क) मा नेकाका उम्मेदवार प्रभात लामाले तीन हजार ६०९ र..
मनाङ प्रतिनिधिसभामा एमाले, प्रदेशमा काँग्रेस र स्वतन्त्र निर्वाचित
लमजुङ, २२ मंसिर । हिमालपारिको जिल्ला भनिने मनाङमा प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले) र प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेस र स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको मनाङमा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार पोल्देन छेपाङ गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । नेका मनाङका सभापति एवं पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका नेका उम्मेदवार टेकबहादुर गुरुङलाई २८९ मतले उछिन्दै एमाले उम्मेदवार पोल्देन छोपाङ गुरुङ निर्वाचित भएका हुन्..
हुम्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको अग्रता
हुम्ला, २१ मंसिर । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले शुरुवाती अग्रता लिएका छन् । एक हजार ६१५ मत गणना गर्दा स्वतन्त्र छक्कबहादुर लामा ४३४ मत प्राप्त गरी अगाडि रहेका छन् । वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ठिमी जोर्दे लामाले २५६ मत ल्याएर उन्लाई पछ्याइरहेका छन् । त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका मंगलबहादुर शाहीले २५१ मत ल्याएका छन् । हालसम्म १३८ मत बदर भएको पाइएको..
जाजरकोट, २१ मंसिर । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शक्तिबहादुर बस्नेतले एक हजार १७१ मत ल्याएर अग्रता लिएका छन् । नेपाली काँग्रेसका राजीवविक्रम शाहले ८६२ मत ल्याएका छन् । त्यस्तै प्रदेशसभा (क) मा वाम गठबन्धनकै गणेशप्रसाद सिंहले एक हजार ३८१ र काँग्रेसका वेदराज सिंहले ७४१ प्राप्त गरेका छन् । प्रदेशसभा (ख) मा पनि वाम गठबन्धनकै करवीर शाहीले एक हजार २००..
निर्वाचन शतप्रतिशत सफल र ऐतिहासिक भयो : फेम्बोसा
काठमाडौँ, २२ मंसिर । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क)राष्ट्रको निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको साझा मञ्च (फेम्बोसा)ले आज सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन शतप्रतिशत सफल र ऐतिहासिक रुपमा अभिलेख कायम राख्न सफल भएको जनाएको छ । निर्वाचन आयोगमा हिजो साँझ भएको छलफल कार्यक्रममा फेम्बोसा राष्ट्रका निर्वाचन पर्यवेक्षकले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण तवरले निर्वाचन सम्पन्न गरेकामा आयोग पदाधिकारीलाई बधाई ज्ञापन गरे । नेपालको..
दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा / प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन : मुलुकभर ६७ प्रतिशत मतदान
काठमाडौँ, २२ मंसिर । हिजो सम्पन्न दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा ६७ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको छ । निर्वाचन आयोग, संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रमा प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी गुल्मी जिल्लामा ७१ प्रतिशत मतदान भएको छ । आयोग मिडिया सेन्टरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले मतदानमा खसेको मत प्रतिशतको आँकडा अझ बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए..
सिन्धुलीमा मतपेटिका बोकेको गाडीमा बम विस्फोट, सामान्य क्षति
सिन्धुली, २२ मंसिर । हरिहरपुरगढी गाउँपालिका–७ क्यानसिरमा हिजो साँझ बम विस्फोट भएको छ । हिजो भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको मतदान सम्पन्नपछि मतपेटिका ल्याउँदै गरेको सवारी साधनमा लक्ष्य गरी बम पड्काइएको हो । हरिहरपुरगढी गाउँपालिका–७ भुताहा प्राविका क र ख मतदान केन्द्रका मतपेटिका ल्याउँदै गरेको सवारी साधनमा लक्ष्य गरी बम विस्फोट गराइएको थियो । सोही क्रममा ना ३ च ९४७१ नंको बोलेरोको सिसा..
पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणना कार्य केहि जिल्लामा शुरु
बिहिवार, मंसिर २१, २०७४ साल
काठमाडौँ, २१ मंसिर । पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएका ३२ जिल्लामध्ये केहीमा आज साँझ पाँचबजेदेखि मतगणना शुरु भएका समाचारहरु प्राप्त भएका छन् । अहिले मुस्ताङ, मनाङ, बैतडी र बाजुरामा मतगणना कार्य शुरु भएको सम्बन्धित जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरुबाट जानकारी प्राप्त भएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख सीताराम शर्मा लामिछानेका अनुसार कूल ९ हजार ४२७ मतदाता रहेको मुस्ताङ्गमा..
अपराह्न ३ बजेसम्म ५७ प्रतिशत मतदान सम्पन्न : निर्वाचन आयोग
काठमाडौँ, २१ मंसिर । निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा अपराह्न ३ बजेसम्म करिब ५७ प्रतिशत मतदान भएको जनाएको छ । आयोग, संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार अहिले सबै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण एवं उत्साहजनक रूपमा मतदान जारी छ । सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा ६६, चितवनमा ६५, सुर्खेतमा ६३ र मोरङ जिल्लामा ६२ प्रतिशत मतदान भएको केन्द्रले जनाएको छ । दोस्रो..
नेपालका मुख्यमन्त्रीले पाउनेछन् यस्ता सेवा तथा सुविधाहरु
मंसिर २१, काठमाडौँ । संविधानले परिकल्पना गरे अनूरुप अब मुलुक तीनतहको राज्य संरचनमा जानेछ । स्थानियतह र प्रतिनिधिसभाको अभ्यास यस अघि देखिनै गरिदै आएको भएपनि मुलुकमा पहिलोपटक प्रदेशसभाको अभ्यास हुँदै छ । अब नेपालमा स्थानियतह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार गरि तीनतहको राज्य संयन्त्रहुनेछ । स्थनियतहको निर्वाचन यस अघि नै भईसकेको छ ।प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन पनि मंसिर १० गते..
काठमाडौँ, २१ मंसिर । पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा घण्टौँ हिँडेर मतदान गर्न जाने गरेको विषय सहज लागेपनि राजधानी काठमाडौँमै डेढ घण्टा हिँडेर मतदान केन्द्रसम्म मतदाता पुगेको भन्ने सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । यो आश्चर्य होइन, यथार्थ हो । भक्तपुरको लोकन्थली घर भएकी अंशु ढुंगेल डेढ घण्टा हिँडेर काठमाडौँको मध्य भाग पुरानो बानेश्वरस्थित रत्नराज्य उच्च माध्यामिक विद्यालय आएर मतदान गरिन् । पुरानो बानेश्वरमा रहेको..
Results 9486: You are at page 302 of 317